Olee otú Naghachi ehichapụ ozi ederede site na ekwentị mkpanaaka na Samsung
Olee otú Naghachi ehichapụ ozi ederede site na Samsung Cell Phone
Olee otú Naghachi ehichapụ ozi na gị Samsung Cell Phone
Dị ka a Samsung onye ọrụ ya bụ nnọọ oké mkpa ka ozi gị anọgide na-emebibeghị. Nke a bụ n'ihi eleghị anya ị na-eji na ekwentị gị n'ihi na ihe niile. N'ụwa taa, gị Samsung ekwentị eleghị anya nwere ihe nile nke gị ozi dị mkpa gụnyere ozi.
Ọtụtụ n'ime anyị na-ekwurịta okwu site na ederede ụbọchị ndị a mere na ọ bụ nke a sịkwa anyị ozi ederede dị nnọọ oké mkpa. Ha na-emekarị na isi nke nkwukọrịta na nwere ike ịbụ na omume a otutu ozi dị mkpa. Ya mere ihe ikpeazụ ị chọrọ bụ ida niile ozi na ị nwere na ekwentị gị. N'ezie ị nwere ike mfe izere a ọnọdụ ebe ị hapụ gị ozi ederede site nanị inwe a ndabere gị ozi.
Mgbe ụfọdụ, ị nwere ike ida ozi gị mgbe ị na-adịghị a ndabere nke ha n'ebe ọ bụla. Na nke a, i kwesịrị ịchọta ụzọ naghachi-ehichapụ ọ bụ furu efu ozi mfe. E nwere software na ike inyere gị aka ime nke a.
Olee otú naghachi ehichapụ ozi na Samsung
Ọ bụrụ na ị na-aga na-agbake furu efu ozi, ụzọ kasị mma ime nke a bụ iji Ụwa 1st data mgbake software maka Android ngwaọrụ. Wondershare Dr. Fone maka Android ga-agbake bụghị naanị ozi kamakwa ọdịyo faịlụ, video faịlụ yana akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị na àgwà nke adịkwa ụfọdụ nke gị mkpa data, a software gị ga-abụ ọhụrụ enyi kasị mma. Ọ bụrụ na ị na-ama na-eche na ọ bụ kwa mgbagwoju anya na-eji, eche ọzọ. Nke a software ga-unu reacquainted na gị efu ọ bụ furu efu ozi ederede na dị nnọọ atọ mfe nzọụkwụ. Ọ na-arụ ọrụ na n'elu 2000 Android ngwaọrụ na ụdị nke dị iche iche Android OS otú ị maara na ọ ga-arụ ọrụ na gị Samsung ekwentị.
Wondershare Dr.Fone for Android - Samsung Text Ozi Iweghachite
Naghachi Data si Samsung
Mere, olee otú ị na-eji ya na-agbake furu efu ozi na gị Samsung ngwaọrụ? A bụ otú.
Naanị 3 nzọụkwụ naghachi ehichapụ ozi ederede site na Samsung color
Wụnye na-agba ọsọ ahụ omume na kọmputa gị, na mgbe ahụ ị ga-ahụ ya isi window n'okpuru.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị Samsung ekwentị na PC ma mee USB debugging
Mgbe ejikọta gị Samsung na ekwentị mkpanaaka gị na kọmputa, ị ga-esi na window n'okpuru. N'oge a, i kwesịrị inwe ike USB debugging na ekwentị na mbụ. Soro ụzọ n'okpuru ime ya:
Cheta na: Ị nwere ike mkpa Ikwupu gị Samsung ekwentị mgbe mwube nke USB debugging. Dị nnọọ jikọọ ya mgbe ị okokụre ya. Mgbe ahụ ị pụrụ ime ka nzọụkwụ ọzọ.
Nzọụkwụ 2. Tụlee na ike iṅomi gị Samsung na ekwentị mkpanaaka
Mgbe ihe omume ahụ na-achọpụta rụọ ekwentị gị mgbe ị na ịtọ USB debugging, ị ga-ahụ na windo dị ka ndị a. Jide n'aka na batrị na ekwentị gị bụ karịa 20%, na pịa "Malite" iji nyochaa na data na ekwentị gị.
Mgbe ihe omume ahụ na-akpali ebe a, ị na-kwesŽrŽ pịa "Kwe Ka", a arịrịọ na-egosipụta na ihuenyo ekwentị gị. Mgbe ahụ nọgide na-pịa "Malite" na usoro si window na-amalite ịgụ isiokwu.
Nzọụkwụ 3. Preview na-agbake ehichapụ ozi ederede site na Samsung
Mgbe iṅomi dị n'elu, a Doppler N'ihi ga-akpaghị aka site usoro ihe omume. Ịnwere ike ihuchalu ma ego ehichapụ ozi ebe a na zuru ezu. Ọzọkwa, ị pụrụ ịhụchalụ ozi na photos ebe a. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ha, ị nwere ike naghachi ha tinyere ozi na otu Pịa.
Cheta na: ehichapụ ozi na ozi ugbu a na-ẹdude na ekwentị gị nwere onwe ha agba. Ọ bụrụ na ị chọrọ ikewapụ ha, i nwere ike iji bọtịnụ na n'elu nke mpio: Naanị egosipụta ehichapụ ihe.
Olee otú mgbe ida gị ozi site na Samsung
N'ezie kasị ezigbo ọnọdụ ga-mgbe ida ozi gị na akpa ebe. Ihe kacha ụzọ mee nke a bụ ndabere gị ozi. E nwere ụzọ abụọ na-eme nke a, ka anya na onye ọ bụla na i nwere ike ikpebi nke otu onye na-arụ ọrụ kasị mma maka gị.
1. Back ruo gị Gmail Akaụntụ
Iji na-eme nke a n'ụzọ dị mfe, ị ga-mkpa iji wụnye ndabere Ozi & akpọ Email App. Ọ bụ dị na Google Play ụlọ ahịa. Ozugbo arụnyere, mgbata na ya imeghe ya. Ị ga-ahụ ndị na-esonụ guzobere.
Na nnọọ top, Kpatụ na Go button ọzọ na "Biko Melite Gmail mbụ."
Na-esonụ window ego Jikọọ igbe na mgbe ahụ banye na-eji gị Gmail nzere.
Ugbu a niile i nwere ime bụ nnọọ ịgwa ndị ngwa nke data ga-kwadoo na ekwentị gị na ọ bụ ya.
2. ndabere na iji Wondershare MobileTrans
The ọzọ n'ezie ụzọ dị mfe iji hụ na ị mgbe ida ọ bụla nke gị ozi bụ iji Wondershare MobileTrans. Ọ dị mfe iji software na ga-unu-akwado elu gị niile data nanị otu click.
Nzọụkwụ mbụ bụ ibudata na-agba ọsọ ahụ Wodershare MobileTrans gị na kọmputa. Mgbe ahụ jikọọ gị Samsung gị na kọmputa na iji eriri USB. The software kwesịrị ịchọpụta ma na-aghọta na ekwentị gị. Ke ufọk window, pịa "ndabere gị ekwentị".
Na nke pụrụ ịkpata window nile nke data na ekwentị gị ga-apụta na niile ga-akpaghị aka ahọrọ maka ndabere. Uncheck ihe ị na-achọghị họrọ na nke a nile, ma ozi gị. The software ga-akpaghị aka họrọ a faịlụ ụzọ ịzọpụta gị ndabere ka na kọmputa gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbanwe nke a nanị pịa akara ngosi nke Ntọala na họrọ faịlụ ụzọ.
Mgbe ahụ nnọọ pịa "Malite Copy" na-eche maka usoro iji wuchaa.
Gbaa mbọ hụ na ekwentị gị na jikọọ na kọmputa gị n'oge dum akwado usoro. Ọ bụ na dị mfe. Gị ugbu a nwere obere mkpuchi bụrụ na ị hapụ gị ozi.
Olee otú ka Wepụ Preinstalled ngwa ọdịnala na Android
Olee otú Naghachi Photos ehichapụ Android ekwentị mkpanaaka na
> Resource> Android> Olee naghachi ehichapụ ozi ederede site na Samsung Cell Phone